VirtualBox 5.0.16 for Windows hosts x86/amd64 ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Friday, April 08, 2016 Service Box No comments
ကွန်ပျူတာနည်းပညာ ပညာရှင်တွေရဲ့ အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး စားရင်းဝင်
(VirtualBox 5.0.16 for Windows hosts x86/amd64) Version လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါပြီ...။
ဟုတ်ပါပြီ... ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်အပါအဝင် Networking နဲ့ပတ်သတ်ပြီး / Cracking and Hacking ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့သူတွေ အပြင်... Window OS မှာ မည်သည့် Window အမျိုးအစားကိုမဆို မိမိရဲ့... Window Desktop အပေါ်၌ပင် အမျိုးပေါင်းစုံ တင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...။
ဥပမာ ကိုယ့်မှာ Mac Os မရှိဘူးဆိုပါဆို... ပြီးတော့ ကိုယ်သုံးနေတာက Window ဆိုတော့ ကိုယ်လည်း Mac Os ကိုအသုံးပြုမှုရင်းနှီးကျွမ်းချင်တာပေါ့...။
အဲ့အခါကျရင်... Computer အရောင်းဆိုင်ကနေ 1000 ပေးပြီး... ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Mac OS Version ကိုဝယ်ယူပြီး... မိမိရဲ့ Window Desktop ပေါ်မှာ အဆိုပါ (VirtualBox 5.0.16 for Windows hosts x86/amd64) လေးနဲ့ အလွယ်တကူ တင်နိုင်တာပေါ့...။
ဒီလောက်ဆိုရင် အရိပ်အမွက်လောက်တော့ သိကြပြီထင်ပါတယ်... ခင်ဗျာ...။
32 bit & 64 bit နှစ်မျိုးလုံးပေါ်မှာအဆင်ပြေပြေ Run နိုင်တာကြောင့်...
ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ... အဆင်မပြေမှုတစ်စုံတရာ နားလည်မှုမရှိမရှိခဲ့ပါက... ကျွန်တော် ချမ်းလေးရဲ့...မှားယွင်းမှုပါခင်ဗျာ...။ ကျွန်တော်ရဲ့ Page လေးမှာ Post လေးတွေများ ၀င်ရောက်ပြီး ရေးသားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...။ အကယ်၍ ကျွန်တော်ကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်
က နံပါတ်လေးကို Call လိုက်ပါ ခင်ဗျာ...။